तिथि मेरो पत्रु »4एक नारी आदर्श पहिलो सन्देश पठाउन कदम
द्वारा Sebastian हैरिस
4 एक नारी आदर्श पहिलो सन्देश पठाउन कदम
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सेप्टेम्बर. 23 2020 |4मिनेट पढ्न
तपाईं अनलाइन डेटिङ माध्यम ले आफ्नो सपना को महिला पाउन चाहनुहुन्छ? महान्, तपाईं के गर्न सबै धेरै लोकप्रिय अनलाइन डेटिङ साइटहरूमा मध्ये एक मा एक प्रोफाइल स्थापना र दर्ता महिलाहरु प्रोफाइल हेर्नका लागि छ.
बस आफ्नो चित्र मा एक नजर छैन. यो सधैं एक सुन्दर तस्वीर हेर्न राम्रो छ, तर तपाईं पत्ता लगाउन चाहन्छौं भने तपाईं प्रत्येक अन्य लागि बनाएको हुन सक्छ भने, तपाईं आफ्नो प्रोफाइल पढेर नै हित छ भने देख्न गर्नुपर्छ, सोख र विश्वास.
तपाईं प्रोफाइल को एक जोडी को माध्यम ले देख्यो र पाएका छन् पल्ट कम से कम एक केटी तपाईं रुचि राख्ने, यो आफ्नो पहिलो सन्देश लेख्न समय छ उनको. यो सामान्यतया अधिकांश पुरुषहरु कम्तीमा एक गल्ती जहाँ भाग हो. तपाईं अनलाइन वा अफलाइन एक केटी आउँदै छन् भने कुनै पनि कुरा, सही तरिकामा कुराकानी सुरु बिल्कुल महत्वपूर्ण छ.
तपाईं अहिले म तपाईंलाई सोध्न जान्छु के को लाज लाग्न सक्छ, तर तपाईं आफ्नो डेटिङ जीवन सुधार गर्न इच्छुक छन् भने, तपाईं इमानदार निम्न प्रश्नको जवाफ गर्नुपर्छ:
के तपाईं कहिल्यै तपाईं अर्को केटी सम्पर्क गर्न अघि एक केटी एक पहिलो सन्देश लेखिएको छ? शायद तपाईंको सन्देश यस जस्तै देख्यो:
म आफ्नो प्रोफाइल मा एक नजर थियो र म तिमीलाई साँच्चै सुन्दर हुन् जस्तो लाग्छ.
तपाईं सामान्यतया यो जस्तै सन्देशहरू लेख्न भने, तपाईं आफ्नो अनलाइन डेटिङ प्रयास विशेष सफल छैनन् किन आश्चर्य छैन. तपाईं दस अन्य मान्छे उसलाई पहिले पठाउनुभयो उनको एउटै सन्देश लेखेर एक महिला प्रभावित छैन.
आफ्नो अनलाइन डेटिङ सफलता बढन गर्न तपाईं सधैं नै लाइनहरु र एउटै मानकीकृत सन्देशहरू प्रयोग गर्ने मान्छे को जनता अलग्गै आफैलाई निर्धारित गरेको छ. तपाईं अलग आफैलाई सेट एक पल्ट, तपाईं अब उप्रान्त कुनै प्रतिस्पर्धा हुनेछ.
1. संदेश निजीकृत
मानिसहरूको धेरै अनलाइन डेटिङ सम्बन्ध मा बनाउन भनेर पहिलो गल्ती तिनीहरूले पनि उनको वास्तविक नाम खोज्न समय लगानी छैन भनेर छ, वा कम से कम उसलाई उपनाम भएको सन्देश व्यक्तिगतकरण गर्न. केही महिला "sweet89" आफूलाई कल तर तपाईं उसलाई डेटिङ प्रोफाइल मा उनको वास्तविक नाम पाउनुहुनेछ भन्ने होइन.
म प्रोफाइल मा कहीं आफ्नो वास्तविक नाम लेखे गर्ने महिलाहरूको अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल को एक धेरै देखेको छु, तिनीहरूले आफ्नो उपनाम रूपमा एक नक्कली नाम प्रयोग पनि भने. उनको वास्तविक नाम पत्ता लगाउन प्रयास मा डाल गरेर, के तपाईं आफ्नो प्रोफाइल पढ्न छन् भन्ने कुरा देखाउँछ. महिला को एक धेरै को लागि दी यस लिन र छैन तपाईं र उनको चित्र भन्दा वास्तवमा ख्याल गर्ने केही मान्छे को एक हो, तिनीहरूले पूरै चोट हो.
यसको वाहेक, हामी मानव जगतले हाम्रो नाम सुन्न प्रेम. यो सिर्फ आफ्नो पहिलो सन्देश हो तापनि, तपाईं आफ्नो नाम संग उनको सम्बोधन यदि त्यो एक बलियो भावनात्मक सम्बन्ध महसुस हुनेछ. यदि तपाईं उनको वास्तविक नाम पाउँदैनन्, तपाईं कम से कम उसलाई उपनाम आफ्नो सन्देश व्यक्तिगत गर्नुपर्छ, बरु "एक सामान्य उपयोग को"हे.
2. यो व्यक्तिगत बधाई
के तपाईं एक महिला दिन सक्छौं सबै भन्दा राम्रो प्रशंसा छ? इमानदार छ र त्यो अघि एक लाख पल्ट सुनेको छैन भन्ने एक. यो एक अनलाइन डेटिङ साइट मा एक सुन्दर स्त्री मान्छे सन्देश को एक धेरै हुन्छ कि धेरै संभावना छ.
संभावना तिनीहरूले सबै त्यो कति सुन्दर र प्यारा उनको बताउने उच्च हो. तपाईँले अन्तिम दस मान्छे उनको लेखेका सही नै लाइन लेख्छ जो सिर्फ अर्को मान्छे हो भने, त्यो सम्भवतः छैन. के तपाईं त्यो सुंदर छ कि उसलाई भन्न त के, उनको हरियो आँखा अनुकूल हेर्न र उनको मुस्कान गरे किनभने तपाईं पनि मुसुक्क?
त्यो कुरा हो कि उनको सामु भन्न थिएन, जसले यस्तो लेखे दस मान्छे. एक महिला एक व्यक्ति प्रशंसा दिने अन्य मान्छे पहिले नै तिनलाई भन्नुभयो त्यही सामान भन्दै भन्दा सधैं राम्रो छ. तपाईं पनि राम्रो तस्वीर गर्ने महिलाहरूको अन्य सयौं उनको र छैन आकर्षित हुन्छन् किन यो बिल्कुल उनको देखाउँछ.
3. किन त्यो विशेष छ?
ठीक, म तिमीलाई आकर्षित हुन्छन् किनभने तपाईं उनको लेख्न चाहनुहुन्छ भनेर थाह, वा कम से कम चित्र त्यो उनको प्रोफाइल मा प्रदर्शित, तर तपाईं उसलाई चिन्न चाहनुहुन्छ किन अन्य कारणहरू के-के हुन्? माफ गर्नुहोस् तर एक राम्रो मुस्कान र लामो गोरा बाल तपाईं एक अनलाइन डेटिङ साइट मा एक महिला चिन्न चाहनुहुन्छ किन मात्र कारण हुनु हुँदैन.
तपाईं व्यक्तिगत प्रशंसा मा आफ्नो सामान्य प्रशंसा परिवर्तन गर्दा तिनी विशेष महसुस हुनेछ, तपाईं उनको केहि कारणहरू लेख्दा त्यो तपाईं मोहित किन तर त्यो पनि राम्रो महसुस हुनेछ, उनको शारीरिक उपस्थिति संग गर्न केही छ कि.
के तपाईं आफ्नो चासो हो किन एक वा दुई कारण थप भने, सीधा व्यक्तित्व लक्षण सम्बन्धित र त्यो उनको प्रोफाइल मा सूचीबद्ध कि सोख हो कि, एक सकारात्मक जवाफ प्राप्त गर्ने संभावना धेरै उच्च हुनेछ.
महिला आकर्षक महसुस गर्न चाहनुहुन्छ, तर तिनीहरू पनि तिनीहरूको शारीरिक उपस्थिति भन्दा रुचि राख्ने मानिसहरू भेट्न चाहन्छु. तपाईं आफ्नो हेराइ र उनको व्यक्तित्व मा चासो हो कि आफ्नो पहिलो सन्देश मा उनको बताएर, तपाईं त्यो कति सुन्दर उसलाई भन्न गर्ने सबै मान्छे देखि अलग आफैलाई सेट, पनि उनले अन्य मानिसहरूको हेरचाह गर्न प्रेम कति उनको प्रोफाइल मा लेखे भन्ने तथ्यलाई देख बिना.
4. किन तपाईं प्रत्येक अन्य लागि सही हुनुहुन्छ?
अब तपाईं सिद्ध पहिलो सन्देश लागि लगभग सबै आवश्यकता छ. अझै पनि सम्झना छ कि केवल एक घटक छ. त्यो तपाईं उनको हेराइ र उनको व्यक्तित्व मन भनी थाह, तपाईं आफ्नो व्यक्तित्व मन किन तर त्यो पनि थाह छ?
तपाईं आफ्नो हेराइ आकर्षित हुन्छन् किन यो राम्रो स्पष्ट छ तर यो तपाईं उनको व्यक्तित्व मा चासो हो किन स्पष्ट छैन. तपाईं बेशक तपाईं त्यो यात्रा छ भन्ने तथ्यलाई प्रेम लेखन सक्छ, तर कसरी त्यो तपाईं उसलाई बस घिउ माथि छैन भनेर पक्का हुन सक्छौं, पनि यो अर्थ बिना.
तपाईं सिद्ध पहिलो सन्देश पूरा गर्न के गर्न अन्तिम कुरा तपाईं उनको सोख र उनको व्यक्तित्व मन किन उनको बताउन छ. तपाईं तिनलाई भन्नुभयो छन् पल्ट तपाईं यात्रा लागि उनको लगाव कदर गर्छौं भनेर, तपाईं पहिले नै सबै एशिया मा यात्रा र अर्को वर्ष दक्षिण अमेरिका यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ छन् किनभने, त्यो तपाईं प्रत्येक अन्य लागि सिद्ध हो किन महसुस हुनेछ.
के तपाईं प्यार मा हो कसरी थाह?
यो उलट आना मा – अनलाइन डेटिङ जान पनि सही हो?
3 कारण एक पहिलो तारीख मा आफ्नो कुकुर नहीं ले गर्न
5 लामो दूरी सम्बन्ध लोप लागि सुझाव – विद्यार्थी संस्करण